Oyster Bay Resort dị na St. Maarten na-esetịpụ Grand Reopening maka June 1
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Industrylọ Ọrụ Ọbịa » Oyster Bay Resort dị na St. Maarten na-esetịpụ Grand Reopening maka June 1
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ Sint Maarten na -agbasa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Oyster Bay Resort, nke ụfọdụ ndị maara dịka "Pearl nke Caribbean," mara ọkwa na Grand Reopening ga-eme na June 1, 2018.
Ebe a na-ewugharị ma na-emezigharị ebe ọ bụ na Hurricane Irma kụrụ na Septemba a gara aga, ma na-adọ oge 1 nke nwughari ma na-ewere ndoputa ndị ọbịa.
Akụkụ mbụ nke mmezigharị gụnyere ọrụ na ọdọ mmiri na-enweghị njedebe, ebe a na-ere nri na ebe a na-a barụ mmanya, na oghere na ogige. Ejirila nkeji iri anọ dị na mainsail weghachite ya na nkeji 24 na ụlọ marina, ụlọ 9 na ọdọ mmiri / oke osimiri, yana nkeji iri na abụọ n'ọnụ ụlọ nnabata / nnabata. Ihe eweghachikwara bụ ụlọ ime ahụ ike, ịsa akwa ndị ọbịa, Sholọ Ahịa Shipwreck, Bodega site na Bay, na Indulgence site na Sea Spa.
Plọ ahịa gbọ mmiri
Lọ Ahịa Ahịa na-emeghe kwa ụbọchị ma na-enye ọtụtụ ihe, onyinye, ihe ncheta, uwe ịsa ahụ, mkpuchi anyanwụ, yana ihe ọ bụla ọzọ ndị ọbịa nwere ike ịchọrọ n'oge ọnụnọ ha. Ọ dị ka ịme njem na Phillipsburg, mana na-enweghị draịva. Kwụsị, lelee ya, ma chọta akụ dị iche iche iji laa n'ụlọ nke ga-echetara gị paradaịs.
Bodega nke Bay
Bodega nke Bay dị na ọnụ ụzọ mbata nke Oyster Bay Marina, yana "ụlọ ahịa nri n'akụkụ ụlọ ezumike" nke na-enye ọ bụghị naanị nri nri zuru oke, nri nri ehihie, nhọrọ gourmet, na champeenu maka oge pụrụ iche, mana ya na-ejekwa ozi dị ka ebe dị mma iji zukọta, nọrọ n'ụlọ ezumike na mpụga nche anwụ nke veranda, ị fineụ ezigbo kọfị na espresso, rie nri ndị ọhụrụ na-ekiri ọrụ ụgbọ mmiri na Oyster Pond, nke bụ ebe obibi 3 marinas dị iche iche Ọ bụ ọrụ “dị obere” nke na-ewu ewu n'etiti ndị ọbịa.
Indulgence site na Sea Spa
Indulgence site na Sea Spa dị nso na ụlọ ezumike ma ọ bụ ebe ezumike zuru oke nke ebe ezumike ahụ. N'ebe a, ndị ọrụ spa ga - eme ka ndị ọbịa jiri mbinye aka Citrus-C na pedicure mee njem; rejuvenate akpụkpọ a Mango Papaya nnu nnu; ma ọ bụ idaba na ngwungwu ohuru nke elekere 4. Mgbe a jikọtara spa na-arụ ọrụ zuru oke yana ibi ndụ okirikiri nke ndị Caribbean, ndị ọbịa na-alaghachi ụlọ ha zuru ike zuru oke, zuru ike, ma dị ọhụrụ n'uche, ahụ na mmụọ.
Maka ama ndi ozo banyere Oyster Bay Beach Resort, pịa ebe a.